Ngaba isiCwangciso seQhinga lakho leMveliso, uBukho okanye iGunya? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 8, 2015 Douglas Karr
Enye yee-analogies ndihlala ndixelela abantu ngayo iarhente yethu kukuba asiyiyo intengiso UJiffy Lube. Umsebenzi wethu ayikokungenisa ukuphuma ngokukhawuleza, phosa isincamathelisi kwifestile yakho sakubona kwinyanga ezayo. Sisebenza ngakumbi emgodini ngokungxama silungiselela imoto ugqatso. Zininzi iiJiffy Lubes phaya- asifuni ukuba ngomnye wazo.
Njengoko ibhekisa kumxholo, ezi arhente zibonelela ngemveliso. Inani le-X lezithuba ngenyanga, X inani lamaphepha amhlophe, X inani le-infographics ngexabiso leedola ze-X. Isivumelwano siqala kwaye bavelisa. Bahlawulwe kwimveliso kunye nexesha elifanelekileyo leprojekthi ngaphandle kokuqwalaselwa nokuba uyaphumelela ugqatso.
Sibona iinkampani ezininzi zisayinela esi sicwangciso kuba-okokuqala-kukho itoni yababhali beekopi phaya abafuna ulungelelwaniso lomsebenzi kwaye-okwesibini- khange bakwazi ukuvelisa umxholo ngaphakathi kwaye bayazi ukuba bayaphulukana kwabo bakhuphisana nabo. Ngelishwa, kuba abayihoyi intsebenzo yomxholo, bayaqhubeka nokuphulukana.
Yindlela ethe tyaba ngaphandle kokubuya kutyalo-mali. Yindibano yokuhlangana kunye nemveliso ephakathi.
Isicwangciso sesibini esibukele ukuba iiarhente ezininzi sizisebenzisa isabelo selizwi or ubukho bewebhu qhinga. Oku kubandakanya umxholo kunye nokunyusa, kunye nemigaqo yokuba ungabanakho ngakumbi kwezikhokelo ezingenayo ukuba ubhala nje ngakumbi kwaye uyikhuthaze ngakumbi. Ack… yintoni ukuchitha ixesha. Ngokuqinisekileyo, ukukhula kwesabelo sakho selizwi kuya kukukhokelela ngakumbi. Andikho konke ukuphangela isicwangciso-qhinga semveliso ngobuninzi kunye nokunyusa, kodwa ilahlekile ithuba elikhulu kakhulu.
Yindlela yomgama kunye nembuyekezo ethe tyaba kutyalo mali. Yindibano ekhawulezayo yokuhlangana kunye nemveliso efanayo.
Ungathini ukuba ungabhala umxholo ongaphantsi onentsingiselo, ukuwuphakamisa, kunye nokunyusa ibango ngokucacileyo? Kungenxa yoko le nto siphuhlisile yethu umxholo wegunya lomxholo nabathengi. Ayikukhawulezisi umgca wokuhlangana kwaye ukhuphe utshintsho lweoyile. Yakha imoto yomdyarho kwaye uyitsalele emingxunyeni ngalo lonke ixesha uphulukana nokhokelo.
Yindlela yokuphindaphinda kunye nembuyekezo eyandayo kutyalo mali. Yindibano yokuhamba kancinci kunye nemveliso yeprimiyamu ethengisa ngcono kakhulu.
Phezolo bendiye kwi Ingqungquthela yeDatha enkulu apha e-Indianapolis. Ababekho yayingumthengi esasimsebenzele iminyaka de bazisa ulawulo olutsha lokuthengisa. Umphathi wentengiso wayenemvelaphi kulawulo lomsitho kwaye wajonga kwiwebhusayithi njengencwadana enkulu kuneqonga lokuthengisa elingenayo. Usike ukubandakanyeka kwethu kwaye inkampani emva koko yaphulukana negunya layo ngokukhangela nakwintlalo.
Ngaphandle koku, umthengisi ovela kwinkampani uthe ngaphandle kwamathandabuzo, uthotho lwe-infographic ebesiyenzele inkampani I-3 iminyaka edlulileyo isengowona mthombo wabo womeleleyo okhokelayo ofanelekileyo ngewebhu. Luhlobo lwenkqubo esithetha ngayo apha. Uhlawula ngaphezulu namhlanje, kodwa ufumana iziphumo ezingcono ngokuhamba kwexesha!
tags: igunya contentubukho bomxholoimveliso umxholoqhinga lomxholouthotho lwe-infographicubukho bewebhu
IBuzzoole: Phumeza amaphulo kunye namaGqwetha eBrand kunye nabaphembeleli
Meyi 9, 2015 kwi-5: 45 AM
Indawo ebalaseleyo iDouglas, inolwazi oluninzi oluncedo.
Ndirhumele nje kwincwadana yakho yeveki.
Meyi 11, 2015 kwi-3: 48 PM